England Archive - Gool FM - page 3	twitter
“Ma ihi laacibka ugu fiican Premier League.”. N’Golo Kante
(London) 20 Mar 2017. Madaalaha kooxda Chelsea N’Golo Kante ayaa carabka ku adkeeyay inuusan ahayn laacibka ugu fiican Premier League ee xilli ciyaareedkan.
Kante ayaa xagaagii Chelsea kaga soo biiray kooxda Leicester City adduun dhan 33-milyan oo bound, wuxuuna ku jiray qaab ciyaareed aad u fiican taa oo ka caawisay Blues inay waqti ku fadhiso hogaanka Premier League.
Xiddiga reer France ayaa si xoogan lala xiriirinayay inuu sanadkan ku guuleysan doono abaal marinta PFA ee laacibka ugu fiican horyaalka, laakiin Kante ayaa 
Xiddigaha Man United iyo kuwa Middlesbrough oo gacamaha iskula tagay kaddib markii uu dhammaaday kulankoodii shalay…+SAWIRRO
(England) 20 Mar 2017. Man United ayaa shalay guul wayn ka gaartay Middlesbrough kulan ka tirsanaa Premier League kaa oo sidoo kale ahaa kulankii 600-aad ay Red Devils guul ka gaarto horyaalka Ingiriiska.
Laakiin kulanka waxaa dhinac socday fadeexad oo waxaa la sheegay in xiddigaha labada dhinac ay gacmaha iskula tageen markii ay dhammaatay ciyaarta oo ay ku sii socdeen qolka dher-badelashada.
Dagaalkan ayaa waxaa sabab u ahaa Eric Bailly iyo Rudy Gestede oo iyagu markii hore garoonka lagu soo kala celiyay.
Kooxda Usbuuca Premier League oo la soo saaray…(Yaa kooxdaada kaga jira?)
(England) 20 Maarso 2017. Shabakadda ciyaaraha ee Goal.com ayaa qallinka u qaadatay oo shax ka sameysay kooxdii ugu fiicnayd horyaalka Premier League usbuucan.
Man City iyo Liverpool ayaa isku mari waayey barbaro 1-1, halka Manchester United ay 3-1 ku garaacday Middlesbrough.
Chelsea ayaa guul raaxo leh ka gaartay Stoke City, halka Arsenal ay guuldarro xanuun badan 3-1 kala kulantay West Bromwich Albion.
Man United, Man City, Chelsea iyo Arsenal ayaa shaxda 11 ciyaaryahan ee ugu fiican usbuucan horyaalka Premier League ku yeeshay min 
Waa sidee kala sarreynta gool dhalinta horyaalka Premier League???
(London) 20 Mar 2017. Romelu Lukaku ayaa u muuqdaa mid hogaaanka si awood leh ugu qabtay kala sareynta goolasha ee Premier League-ga.
Belgium-ka ayaa bilowgii ololahan ku jiray qeybaha dambe iyada oo uu hor booday waqti dheer Diego Costa.
Sidoo kale waxaa lumay Alexis Sanchez iyo Zlatan Ibrahimovic oo iyaguna si weyn uga dhex muuqday jadwalka fiktiisa srae.
Hada waxa uu u muuqdaa mid u dhexeeya loolanka Lukaku iyo Harry Kane.
Weeraryahanka Everton waxa uu leeyahay 21 halka Kane uu iska leeyahay 19.
LIISKA 10-KA UGU 
Haddaba halkaan hoose 
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay Manchester United guusha ka gaartay kooxda Middlesbrough ee Premier League
(Manchester) 20 Maarso 2016 – Kooxda Man United ayaa guul 3-1 ka gaartay naadiga Middlesbrough kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Saddexda gool ee ay Man United guusha ku qaadatay kulankan waxaa kala dhaliyey Fellaini, Lingard iyo Valencia, halka goolka qura ee kulankan ay Middlesbrough ka heshay Gestede.
>- Manchester United ayaa soo degtay kaalinta shanaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, iyadoo soo gabagabaysay 184 maalmood oo ay fadhisay kaalinta lixaad waana 
EPL: Manchester City iyo Liverpool oo isku garab dhacay [Sawirro]
(Manchester) 19 Mar 2017. Manchester City iyo Liverpool ayaa isku garab dhacay kulankii caawa ku soo idlaaday Etihad Stadium.
Muwaadiniinta oo soo dhaweysay wiilasha Klopp ayaa ku sigatay in laga badiyo kaddib markii uu daqiiqadii 52-aad gool ku laad ugu shubay James Milner.
Hase ahaatee, waxaa badbaadiyey dhinaca Guardiola Sergio Kun Aguero oo baas dhaw uu siiyey Kevin de Bruyne shabaqa dhex dhigay daqiiqadii 69aad.
Labada kooxoodba waxa ay isku heleen fursado halis badnaa goolalna loo filan karay oo aan dhalan.
Ugu dambeyn jadwalka Premier 
Man United oo Taariikh cusub oo dhanka guulaha ka dhigtay Premier League 600 oo kulan…(Imisaa laga badiyay, yaase ku soo xiga dhanka guulaha??)
(Manchester) 19 Mar 2016. Kooxda Man United ayaa rikoodh dhanka guulaha ah ka dhigtay horyaalka Premier League kaddib guushii ay dhawaan ka gaareen kooxda Middlesbrough oo ay ku mareen 3-1.
Guusha ay gaartay Red Devils ayaa ka dhigan inay gaartay guusheedii 600-aad ee Premier League waana kooxda ugu guulaha badan horyaalka Ingiriiska.
Kooxda ka arrimisa Old Trafford ayaa ciyaartay Premier League 951-kulan, waxay adkaatay 600 oo kulan, waxaa laga adkaaday 147-kulan, bar-baro 204-kulan.
Haddaba Man United waxaa dhanka guulaha ku soo xiga kooxa 
Marouane Fellaini oo ka baxay abaartii gool la’aanta ee Premier League
(England) 19 Mar 2017. Timo wayne Marouane Fellaini ayaa ugu dambeyn ka baxay abaartii ka heysatay gool dhalinta Premier League kaddib markii uu shabaqa tagay kulanka ay iminka Man United la yeelaneyso kooxda Middlesbrough.
Fellaini ayaa madaxa ku dhaliyay karoos uu soo qaaday Ashley Young daqiiqadii 30-aad ciyaarta iminka ka dhaceysa gegada Riverside Stadium.
Waa goolkii ugu horreeyay uu dhaliyo 30-kulan uu ciyaaray Premier League kaddib.
Waxaase arrinka xiiso u yeelaya inuu daqiiqadii 30-aad dhaliyay goolkiisii ugu horreeyay 30-kulan kaddib Premier League.
Wenger oo isagoo cadaadis adag saaran yahay haddana go’aansaday inuu sii joogo Arsenal (Meeqa sano?)
(London), 19 Maarso 2017 –Tababaraha Kooxda Kubadda Cagta Arsenal ee Ingiriiska Arsene Wenger ayaa shaaca ka qaaday in uu mar hore go’aan ka gaaray mustaqbalkiisa isagoo ku gacan seyray inuu xaalad cakiran kaga tago garoonka Emirates Stadium.
Sida saakay lagu qoray ‘Sunday Express’ heshiis laba sanadood ah ayaa miiska u saarnaa inuu saxiixo Macallinkan 67 sano jirka ah, balse Wenger waxa uu ogolaaday inuu hal sano oo kale oo qura uu la sii joogo Arsenal.
Tababare Wenger oo Arsenal hoggaankeeda 